Ndị na-emepụta ọdịdị ala na ndị na-eweta ya | China Landscape Grass Factory
Odida obodo Grass N'ihi Playgro ...
Ntanetị ahihia maka Playgro ...
Odida ala Grass maka Golf-86
Odida ala Grass maka Golf-34
Okirikiri ala maka Ubi-326
Size: 30cmx30cm Turf bụ 100% mgbochi ịka nká na UV 2.Turf base bụkwa 100% mgbochi ịka nká na UV 3. Njupụta, nlele, ọnụego stitches nwere ike gbanwee site na chọrọ. Ya mere na-eri nwere ike ọzọ ma ọ bụ obere. 4.The ọkpụrụkpụ na obosara nke eriri / Yarn nwere ike gbanwee site chọrọ, N'ihi ya, ndị na-eri nwere ike ịbụ ihe ma ọ bụ obere. 5.Has akwa na-eguzogide ọgwụ 6.Enyi na enyi na enyi, enweghị ọla ọ bụla dị arọ. 7. eguzogide unyi, okpomọkụ, static ọkụ eletrik na mkpọtụ wdg Mfe C ...
Okirikiri ala maka azụmahịa-111
OBODO & AKW COMKWỌ AKW COMKWỌ AKW GKWỌ AHITYR THE! Wanhe Grass maka obodo & mpaghara azụmahịa bụ azịza enyi na gburugburu ebe obibi maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ọ bụla n'obodo ahụ. Ọ na-enye ụzọ okike iji wuo oghere ndị ọzọ maka ndị mmadụ. Site na nlekọta ya dị ala, ọ bụkwa ụzọ kachasị ọnụ ahịa maka obodo na mpaghara azụmahịa. Ntinye ya di mfe na-enye ohere oge dị mkpirikpi karịa nke ahịhịa nkịtị. Ihe Pee + eyi Agba Dị Ka Kwa Pictures ma ọ bụ ngwaahia ...
Landscape Grass maka Azụmaahịa-321W
Okirikiri ala maka azụmahịa-344
Odida ala Grass maka Azụmaahịa-90E
Odida ala Grass maka Ubi-302
ARBR G ARBARR IS ARB ISR IS ISBERR IS ISB ISRONG ỌR NO! Are ka na-agwụ ike nke sod mowing? You na-atụ ụgwọ ego akwụghị ụgwọ maka ahịhịa mmiri? Ihere na-eme gị maka ubi a na-emegharị emegharị nke nwere isi nkwọcha ebe niile? Wanhe Grass dị ebe a iji kpochapụ nsogbu gị na nchegbu nke ịkọ ugbo. Ihe Pee + eyi Agba Dị Ka Per Pictures ma ọ bụ ahaziri Ikpo Elu 5mm-50mm ma ọ bụ ngwaahia Yarn Type Kwụ Ọtọ Tufts njupụta 12600m2 ma ọ bụ ngwaahia Yarn Content Anti-UV; ...
Odida ala Grass maka Ubi-304
Ihe Pee + eyi Agba Dị Ka Per Pictures ma ọ bụ ahaziri Ikpo Elu 5mm-50mm ma ọ bụ ngwaahia Yarn Type Kwụ Ọtọ Tufts njupụta 12600m2 ma ọ bụ ngwaahia Yarn Content Anti-UV; Pee ngwugwu size 2 * 25m ma ọ bụ 4 25m Per Roll ma ọ bụ ahaziri Primary Backing eyi + Non-kpara / eyi + Net Elu 30mm ma ọ bụ ngwaahia mkpuchi Standard SBR Latex / PU Ndabere Drainage Design Drainage Oghere Roll Obosara 2 / 4m ma ọ bụ ahaziri Roll Ogologo 25m ma ọ bụ Customi ...
ARBR G ARBARR IS ARB ISR IS ISBERR IS ISB ISRONG ỌR NO! Are ka na-agwụ ike nke sod mowing? You na-atụ ụgwọ ego akwụghị ụgwọ maka ahịhịa mmiri? Ihere na-eme gị maka ubi a na-emegharị emegharị nke nwere isi nkwọcha ebe niile? Wanhe Grass dị ebe a iji kpochapụ nsogbu gị na nchegbu nke ịkọ ugbo. Ihe Pee + eyi Agba Dị Ka Per Pictures ma ọ bụ ngwaahia Ikpo Elu 5mm-50mm ma ọ bụ ngwaahia Yarn Type Kwụ Ọtọ Tufts njupụta 12600m2 ma ọ bụ ngwaahia Yarn Content ...
Oge GOLF INWE KA GIFE GREEN IN BACKYARD! Ezubere na ebe Wanhe Grass maka golf ka emeputara ma meputa ya dika ihe omuma di iche iche na-acha ndu ndu, na-enye ezigbo ihe omuma banyere uzo na ime ihe. Ọdịmma ya zuru oke na-ekwe nkwa mpịakọta bọọlụ zuru oke ma na-enye nkasi obi dị ụtọ mgbe ị na-egwu ya. Ugbu a ị nwere ike ịnwe mpaghara omume naanị obere ole na ole! O nwekwara ike ịbụ ebe ntụrụndụ maka ezinụlọ dum! Ihe Pee + eyi Agba Dị Ka Kwa P ...
Odida ala Grass maka egwuregwu-90E4
Egwuru egwu na-egwu ya ma nwee ọchị! Wanhe Grass maka ebe a na-egwu egwuregwu na-emepụta ebe ụmụaka na-atọ ụtọ, bụ ndị ga-ahụ ịdị nro na ọdịdị dị ịtụnanya n'anya. A na-arụpụta ngwaahịa ndị ahụ dịka ụkpụrụ nchekwa siri ike (DIN, Reach, RoHS, wdg) na-enweghị ndu ma ọ bụ mmetọ ọgwụ ndị ọzọ na-emerụ ahụ. Kidsmụaka gị nwere ike igwu egwu na ya n’enweghị nchegbu ọ bụla gbasara anataghi ma ọ bụ egwu ndị ọzọ metụtara ahụike. Nhọrọ nhọrọ ya dị iche iche na - enyere gị aka ịmepụta mpaghara egwuregwu dị iche iche ma ọ bụ bọọdụ egwuregwu maka ...
Odida ala Grass Maka Ama egwuregwu-111
Ogige Astro Turf, Bọọlụ Turf Grass, Caromi Ahịhịa Grass, Ru Egwuregwu Golf Grass, Wuru Lawn, Nchikota ahihia ahihia ahihia ala,